တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး H.E. Smt. Sushma Swaraj ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး H.E. Smt. Sushma Swaraj ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ ၊ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာန၊ ဝနျကွီး H.E. Smt. Sushma Swaraj ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။